Ukugcwalisa umshini wefektri, abahlinzeki - China ukugcwalisa umshini Abakhiqizi
IFAYGO UNION GROUP inezimboni ezintathu zamagatsha. Eyokuqala i-FAYGOBLOW eyakha futhi yenze umshini wokubumba we-PET, i-PE njll. I-FAYGOBLOW inamalungelo obunikazi ama-5 okusungulwa, namamodeli wokusiza obunikazi abayisishiyagalombili. Umshini wokubumba we-FAYGO PET ungomunye wedizayini esheshayo futhi eyonga amandla emhlabeni. Imboni yesibili yi-FAYGOPLAST, eyenza imishini ye-extrusion epulasitiki, kufaka phakathi umugqa wepulasitiki wepayipi we-extruding, umugqa wepulasitiki we-extruding line. Ikakhulukazi i-FAYGOPLAST ingahlinzeka ngejubane eliphezulu kuze kufike ku-40 m / min PE, umugqa wepayipi le-PPR. Ifektri yesithathu yiFAYGO RECYCLING, ecwaninga ubuchwepheshe obusha ebhodleleni lepulasitiki, ekusetshenzisweni kabusha kwamafilimu nasekuhlinzekeni ngamathambo. Manje I-FAYGO RECYCLING ingenza kufika ku-4000kg / hr. Umugqa wokuwashwa kwamabhodlela e-PET, nolayini wokuwasha ifilimu owenziwe ngo-2000kg / hr
Incazelo yomshini wokugcwalisa ngamalitha ama-5 Lo layini wokugcwalisa amanzi ukhiqiza ngokukhethekile amalitha wamanzi acwilisa amabhodlela, izinhlobo zawo (b / h) eziwuhlobo lwe-100, uhlobo lwe-200, uhlobo lwe-300, uhlobo lwe-450, uhlobo lwe-600, i-90 ...
5L / 10L Rotary okuzenzakalelayo Bottle Ukugcwalisa Machine
Umshini wokugcwalisa okuzenzakalelayo we-5L 1. Umshini wokugcwalisa okuzenzakalelayo 3 kumaminerali / umshini wokugcwalisa amanzi omsulwa amukela ubuchwepheshe bokuhlanza / ukugcwalisa / ukufaka i-3-in-1 technology, isilawuli se-PLC, Isikrini sokuthinta, senziwa ikakhulukazi ...
umshini wokugcwalisa isiphuzo se-carbonated-Izici: 1. Lolu hlobo lomshini wokugcwalisa isiphuzo se-carbonated luhlanganisa imisebenzi yokuwasha, yokugcwalisa neyokujikeleza kuyunithi eyodwa.Iyi-automati ephelele ...
Umshini Wokugcwalisa Amanzi Okuphuza Lo mshini wokugcwalisa amanzi ozenzakalelayo we-CGF we-3-in-1 usetshenziselwa ukukhiqiza amanzi amaminerali asemabhodleleni, amanzi ahlanziwe, isiphuzo esinotshwala nokunye ...
Isingeniso somkhiqizo Le CGF Wash-filling-capping 3-in-1unit: Imishini Yesiphuzo isetshenziselwa ukukhiqiza ijusi le-PET lamabhodlela nezinye iziphuzo ezingezona igesi. ICGF Wash-filling-capping 3-in-1unit: Bevera ...
Isingeniso somkhiqizo Lo mshini umshini wokufaka uwoyela we-2-in-1 othomathikhi. isebenzisa uhlobo lokugcwalisa i-piston, ingasebenza kuzo zonke izinhlobo zamafutha adliwayo, uwoyela womnqumo, i-sunfl ...